बिबाह भएको २२ महिनासम्म श्रीमतीले एक पटकपनि स’म्बन्ध रा’ख्न नदिएपछि सुरेन्द्रले जीवन त्या’गे… « गोर्खाली खबर डटकम
बिबाह भएको २२ महिनासम्म श्रीमतीले एक पटकपनि स’म्बन्ध रा’ख्न नदिएपछि सुरेन्द्रले जीवन त्या’गे…
काठमाडौं । जीवन त्या’गको एक अनौठो घ’टना बाहिर आएको छ । भारत, गुजरातको अहमदाबादमा एक जना पतिले आफ्नी पत्नीसँग है’रान भएर यस सं’सारबाट वि’दा लिएका हुन् । यस घ’टनापछि सासुले आफ्नी बुहारी विरु’द्ध कि’टानी जा’हेरी दिएकी छिन् । मनिनगर, अहमदाबादकी ३२ वर्षीया गीता परमारको २२ महिना अघि सुरेन्द्र सिंहसँग विवाह भएको थियो ।
उनकी सासु मुल्ली परमारले आ’रोप लगाईन् कि उनले विवाह गरेको २२ महिनाको अवधिमा गीताले सुरेन्द्र सिंहसँग शा’रीरि’क सु’खभो’ग राख्न मानिन् । सुरेन्द्र सिंह पत्नीको यस व्यवहारले धेरै त’नावग्रस्त थिए । त्यसैले उनले जीवन त्या’ग गर्न पुगे । उनकी सासुले एफआईआरमा बताइन् कि उनी घर गए पनि उनले दुबैलाई छुट्टै सु’तिरहेको देखेकी थिइन् । सासु मुल्ली परमारले छोरालाई यसबारे सोध्दा उनका छोराले उनलाई भनेका थिए कि बिवाह गरेको २२ महिना पछि पनि गीतासँग कुनै सम्बन्ध छैन ।
छोराले आमासँग गीताले आफुसँग न’सुत्ने श’पथ खाएको बताएका थिए । सुरेन्द्र सिंह एक रेल कर्मचारी थिए भनिएको छ । अक्टोबर २०१८ मा उनले गीतासँग बिहे गरेका थिए । यस अघि उनको २०१६ मा पहिलो श्रीमतीसँग सम्बन्धवि’च्छेद भएको थियो । यता, गीताले पनि सुरेन्द्रसँग बिहे गर्नुभन्दा अघि दुई जनासँग सम्बन्धवि’च्छेद गरेकी थिइन् ।
सुरेन्द्र सिंहलाई विवाह भएको २२ महिना पछि पनि शा’री’रि’क सु’खभो’ग राख्न नपाउँदा त’नाव भएको थियो । पछि, ती दुईबीच झ”गडा पनि भयो । गीता घर छोडेर आफ्ना बाबुआमाको घरमा गइन् । २७ जुलाईमा परिवारका सदस्य सबै एक छिमेकीको अ’न्त्येष्टिमा जाँदा सुरेंद्र सिंह एक्लै घरमा बसेका थिए । यही मौकामा पंखाको स’हयोगमा उनी यो सं’सार छो’ड्न वा’ध्य भएका हुन् ।
भक्तपुरमा कुकुरसहित एकै परिवारका तीनजनाको शव यस्तो अवस्थामा भेटियो
नयाँ महामारी आउन सक्ने शंका गरिएको के हो ‘लङ कोभिड’? कसलाई छ कति खतरा ?
आज सुनमा इतिहासकै ठूलो मूल्य ! पत्याउनु हुन्छ? फेरी बढ्यो, हेर्नुहोस तोलाको कति पुग्यो ?